Ndị na-emepụta ihe ọkụ ọkụ - China Ngwa Ngwaọrụ Ngwa & &lọ ọrụ
Anyị tumadi na-emepụta na mbupụ igba ígwè osisi ọkụ, ígwè stoves, igba ígwè cookware, BBQ, igba ígwè nfuli wdg Anyị nwere ike ezitekwara OEM ọrụ, anyị na-nzuzo maka ahịa imewe na azụmahịa nzuzo nditịm. (Anyị na-adịghị retail ngwaahịa onye ọrụ ozugbo.) Anyị nwere mmepụta na ọrụ ahụmahụ.Our foundry e hiwere na 2001, ọ malitere na-emepụta England ịkpụ nkedo ígwè ji akwa mantel wdg n'oge ahụ, n'ihi na nke nlezianya àgwà akara, anyị na ngwaahịa ndị goo .. .
Ihuenyo, ụdị arịa ụlọ nke ọdịnala ọdịnala ndị China na-eji arụ ọrụ iji gbochie ifufe, nke a na-akpọ "kpuchie ifufe ya". Dịka akụkụ dị mkpa nke arịa ụlọ ọdịnala, ihuenyo nwere ogologo akụkọ ihe mere eme. Ngosipụta ihuenyo niile na ọnọdụ a ma ama nke ime ụlọ ahụ, na-ekere òkè nke nkewa, ịchọ mma, ifufe, nhazi. Ọ na-egosipụta ọ bụla ibe ya na arịa ụlọ kpochapụwo, wepụta nke kachasị mma na ibe ya, bụrụ ihe ịchọ mma ụlọ nke China niile, ma ugbu a ...
Aha ngwaahịa Aha: Akụrụngwa akụrụngwa Agba: Black ntụ ntụ Ngwaahịa akụrụngwa / mandrel, gụnyere nko, swiiti, spades, tongs na nkwado. Enwere ike iji nko ọkụ ọkụ mee ọkụ, Enwere ike iji ihicha ebe a na-ekpo ọkụ, Enwere ike iji shọvel eji eji ọkụ ash ash, A na-enwe ike iji bulie nkụ. Tinye n'akụkụ ebe ọkụ, nwere ike icho mma ọkụ, jiri adaba, mara mma ma dịkwa mfe. Hebei Womho Imp. & Exp. Trade Co., Ltd. na-elekwasị anya ...